SHT Multilayer Zirconia Block Manufacturer - Sina SHT Multilayer Zirconia Block Factory & mpamatsy
Yucera 1200MPa hiondrika ...
Yucera nify ST zirconia ...
Super Clear Zirconia Disc 98mm Multi-layer Zirconia Block ho an'ny fitaovana Crown Dental mifanentana misokatra CAD CAM
Mpamatsy vokatra varotra efa za-draharaha
Mpamorona endrika sy varotra matihanina ho an'ny serivisinao
Mpamatsy volamena Alibaba, ozinina eken'ny CE & ISO
24 ora an-tserasera, ny fanontaniana rehetra dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora ara-potoana
Ny vokatray dia ny vavahady zirconia nify seramika, ny fitaovana CADCAM mifandraika amin'izany, ny fitaovana fanontana 3D ary ny vokatra am-bava hafa mifandraika amin'izany.
YUCERA mpanamboatra fitaovana nify sy fitaovana mpanamboatra zirconia multilayer alohan'ny alokaloka
YUCERA SHT multilayer zirconia block dia manana transluceny, loko multilayer ary hery miondrika tena tsara. Ity sakana zirconia multilayer ity no kapila ziconia multilayer sarobidy indrindra koa ho an'ny tsenanao manaraka ny fironana ary mety amin'ny CAD / CAM sy ny rafitra tanana.
Ny zirconia blocks / blanks dia mifanaraka amin'ny marika samihafa amin'ny rafitra CAD / CAM sy ny rafitra manual, toy ny rafitra Zircon, ny rafitra sirona Inlab, ny rafitra Kavo, ny rafitra Amann Girrbach, ary ny rafitra Porland, sns.
3D Multilayer Monolithic Zirconia Bank Dental Milling Machine Amin'ny alàlan'ny tetezamita voajanahary voajanahary, tsy mila fandokoana
zirconia blocksare vita amin'ny vovoka zirtonia kilom-pianarana nanometer. Ny vovo-tany dia vongan'ny isostaticpressing mangatsiaka amin'ny alàlan'ny tanjaka avo lenta ary avy eo alohan'ny soritr'aretina sasany dia omena mari-pahaizana tsara.
3D Multilayer zirconia blocks dia azo ampiasaina hamoronana satro-boninahitra, tetezana, fidirana ary veneer an'ny denture parlementaire misy ambaratonga sy loko hafa amin'ny translucency.